ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်နှင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံ အခြေစိုက် The Chartered Institute of Arbitrator (CIArb) တို့မှ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိ ပြည်တွင်းပြည်ပ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် အငြင်းပွားမှုများကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကျင့်သုံးနေသောနည်းလမ်းများနှင့်အညီ အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေးအတွက် အနုညာတစီရင် ဆုံးဖြတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် ဥပဒေရေးရာဗဟုသုတရရှိစေရေး၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ဆက်သွယ်မှုပြုနိုင်ရေး ၊မကြာမီဖွဲ့စည်းတော့မည့် Myanmar Arbitration Center (MAC) တည်ထောင်ရာတွင် လိုအပ်လျှက်ရှိသော Arbitrator များ ပြုစုပျိုးထောင်ရေး […]
ဘရူနိုင်းဒါရူဆလမ်နိုင်ငံရှိ University Brunei Darussalam (UBD) နှင့် FPT University တို့ ပူးပေါင်း၍ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ Da Nang မြို့ရှိ UBD-FPT Global Centre တွင် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားမယ့် “Scholarship on Enhancing Professional Communication Skills for ASEAN 2019” Prgramme 1: Professional Communications in English နှင့် Programme […]
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ်သည် ထိုင်းနိုင်ငံ University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC) နှင့် ပူးပေါင်း၍ “စီးပွားရေး စီမံခန့်ခွဲမှု မဟာဘွဲ့”သင်တန်း Global MBA (Batch-12) ကို၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ စတင်၍ ဖွင့်လှစ်မည် ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုဖွင့်လှစ်မယ့် Global MBA (Batch-12) ရဲ့ Admission Schedule ကို 2nd Round […]
ဇန်နဝါရီလ-မတ်လအထိ တန်းခွဲသစ်များဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အသီးသီးတွင် အတွေ့အကြုံရှိ ဝါရင့်ဆရာ၊ဆရာမများမှ သင်ကြားပို့ချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်သွယ်ရန်- ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၂၃၁၄၃၄၄~၄၉ ၊ လိုင်းခွဲ-(၁၃၄)၊ ၀၁-၂၃၁၇၄၇၉
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ်နှင့် University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC) တို့ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သော Master of Business Administration (Global MBA) သင်တန်း Batch-12 ကို (၁၅.၁၂.၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် Pre-study ဖြင့် စတင် ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါသင်တန်းတွင် ပညာသင်ဆုပေးအပ်မည့်အစီအစဉ်ရှိပါသဖြင့် အောက်ပါ သတ်မှတ်ချက်များ၊ လိုအပ်သည့်အရည်အချင်းများနှင့် ပြည့်စုံသူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ […]
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ်သည် ထိုင်းနိုင်ငံ University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC) နှင့် ပူးပေါင်း၍ “စီးပွားရေး စီမံခန့်ခွဲမှု မဟာဘွဲ့”သင်တန်း Global MBA (Batch-12) ကို၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ စတင်၍ ဖွင့်လှစ်မည် ဖြစ်ပါတယ်။ Global MBA Program သည် ထိုင်းနိုင်ငံ University of the Thai […]
Global MBA Batch 11 ကျောင်းသားကျောင်းသူများအား ကြိုဆို
အနာဂတ်လူငယ်စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်များပေါ်ထွန်းလာစေရေး၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် စီးပွားရေးအသိုက်အဝန်း မြှင့်တင်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ UMFCCI နှင့် UTCC ပူးပေါင်းကာ ၂၀၁၂ခုနစ်တွင် Global MBA offshore program ကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ ယမန်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ Sule Shangri-La Hotel ၌ Global MBA Offshore program Batch-11 တွင် တက်ရောက်မည့် ကျောင်းသားကျောင်းသူများအား ကြိုဆို၍ ညစာစားပွဲ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ Global MBA […]
UMFCCI Training Institute မှ သင်တန်းများ စတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီ
ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီမှ ကြီးမှူး၍ အသင်းချုပ်အသင်းဝင်များနှင့် ညီနောင်အသင်းအဖွဲ့များ၏ အသင်းဝင်များ အသိပညာ ရရှိစေရန် ရည်ရွယ်ပြီး UMFCCI Training Institute တွင် သင်တန်းများကို (၁၅.၉.၂၀၁၈) ရက်နေ့မှာ စတင်ဖွင့်လှစ်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖွင့်လှစ်မယ့် သင်တန်းတွေကတော့ 1. Office Management Batch-26 2. Business Management Batch-6 3. Human Resource […]
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ် (UMFCCI) ၏ Technical Vocational Education Training Unit သင်တန်းကျောင်းမှ သင်တန်းသားများအား သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်ကျွမ်းကျင်၍ လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံရရှိစေရန်၊ အလုပ်အကိုင်များရရှိစေရန်၊ အလုပ်ရှင်နှင့်အလုပ်သမား နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိစေရန်၊ အသေးစားလုပ်ငန်းရှင်များအဖြစ် ရပ်တည်လုပ်ကိုင်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ဖွင့်လှစ်ပို့ချ သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လျှပ်စစ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်အသက်မွေးလိုသူများအတွက် Basic Electrical Wiring Installation Training (လျှပ်စစ်အခြေခံဝါယာရင်း တပ်ဆင်ခြင်းသင်တန်း) အား စာတွေ့၊ […]
The Project for Human Resource Development Scholarship (JDS) in Myanmar ၂၀၁၈ အစီအစဉ်အရ Master of Business Administration (MBA) ပညာသင်ဆုသို့ ဘာသာရပ်အလိုက် လျှောက်ထားနိုင်ပါပြီ 1. Economic/Business Administration International University of Japan (IUJ) Master of […]